Dantaada Gaarka Ah Waxaa Ka Muhiimsan Midda Guud (Faallo Cajiib Ah) | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Dantaada Gaarka Ah Waxaa Ka Muhiimsan Midda Guud (Faallo Cajiib Ah)
Dantaada Gaarka Ah Waxaa Ka Muhiimsan Midda Guud (Faallo Cajiib Ah)
07 June 2016 War saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Dowladda Federalka Soo-maaliya ay ka xuntahay khilaafka Diblomaasiya-deed ee soo kala dhexgalay Dowladaha Carabta ee walaalaha ah.
“ Mowqifka dowladda Federaalka Somaliya ka qaadatay khilaafka dalalka Khaliijka ayaa ah mid cad oo ay ku muujineyso in aanay dhinacna la safneyn dowladaha khilaafka u dhaxeeya ”.
Go’aan ka geesinimada leh ay qadatay dowlada somaliya inta badan bulshada somaliyed wey soo dhaweeyen, weyna taagereen. Seddex maalin ka dib, 10 June 2017 shir an caadi aheyn ay iskugu yimaaden golaha wasiirada muumalka Somaliland ayaa lagu yiri.
” Somaliland waxay si buuxda u taageersan tahay mawqifka iyo aragtida ay ka qaateen Sucuudiga iyo Imaaraadku khilaafka siyaasiga ah ee u dhexeeya iyaga iyo Dalka Qadar ”.
Taasi waxay, dhabar jab ku noqotay go’anka dowlada Federal-ka somaliya, waxa ka sii darneed kana naxdin baxdeen war an laga fileyn maamul dowlada tooos u yimaado.
16 August 2017 war qoraal ah oo ka so baxay xafiiska Madaxweynaha maamulka Gobaleed Putland oo lagu yiri. “ Puntland waxa ay xiriir iskaashi oo isugu jira mid ganacsi iyo mid amni ay la leedahay dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka sida darteed go’aankeena waa mid iska cad oo la safan dowladaha uu iskaashigu naga dhaxeeyo ” wuxu noqday wax lal yaabo balse waxuu gogol xaar u noqday. 17 Septemper 2017 si lamid war qoraal ah oo ka so baxay xafiiska madaxweynaha Maamul Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa lagu yiri.
” Go’aanka dowladda Federaalka ka qaadatay xiisada Khaliijka bishii June 2017 wuxuu ahaa mid aan laga tixgelin lagana tashan dhamaan dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo shacab-kooda ee ay saameynta ku yeelaneyso ”.
Sida muuqata dhamaantood waxay wax kama jiraan ku tilmaamen go’aanka dowlada Federal-ka Somaliya, halkii ay kaga danbeyn lahaayen kuna ixtiraaman lahaayen.
Dhinaca kale, waxa la si weydinaya sababta ugu aamusanyihiin, labada aqal ee Baarlamaanka Somaliya go’aanada qiyaaliga ah oo halista ku ah jiritaanka qaranimada iyo dowladnimada somaliya ay qadanayaa mumulada dalka ka qaarkood.
Ugu danbeyn, madaxda dalka heer gobol iyo heer federal waxaa ka codsanaa in ay meel iska dhigaan danahooda gaarka ah, kana shaqeyaan danta si an u helno dowlad dhameystiran oo dadkeedu dunida laga ixtiraamo. Walal inta ad xilka u heysa umadda somaliyed, si sharaf iyo karaamo leh ugu adeeg, carab waxba nagama galin dagaalkod iyo hishiiskoda, somaliya waxa dan u ah Midnimo, Dowladnimo Wadajir iyo Hormar.
W/Q:- C/shakuur Geesey